Shir lagu Qiimaynayay Mashruuca RIF ee Heer Qaran. - Cakaara News
Shir lagu Qiimaynayay Mashruuca RIF ee Heer Qaran.
Naasireed,(CN) Axad, 17ka January, 2016, Waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Naasireed ee caasimada deegaanka Oromiya shir lagu qiimaynayay waxqabadka 6dii bilood mashruuca hoos u dhigida dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee marka magaciisa la soo gaabiyo afka qalaad loo yaqaano RIF ee heer qaran oo mudo 3 maal-mood ah socday.
Shirkaasi qiimaynta ah oo ay hogaaminayeen masuuliyiin ka socday wasaarada caafimaadka ee JDFI ayaa waxaa ka soo qaybgalay masuuliyiinta mashruucan ee degaanada uu ka hawlgalo dalka oo ah afar deegaan, kuwaasi oo kala ah deegaanka somalida itoobiya, Oromiya, Canfarta iyo deegaanka Dhabuub.
Mashruucan oo ah mid hirgalintiisa la bilaabay sanadka 2008TI ayaa waxa uu ka hawlgalaa 144 degmo oo ah deegaanada dalka wuxuuna deegaanka somalida itoobiya ka hawlgala dhamaanba degmooyinka deegaanka kaasi oo marka loo eego deegaanada uu ka hawlgalo dalka 50% ka hawlgalo DDSI.
Mashruucan ayaa waxa uu diirada saaraa xoojinta adeegyada caafimaadka gaar ahaan dhinaca hooyada iyo dhalaanka waana mashruuc hoos taga xafiisyada caafimaadka ee deegaanada marka la eega deegaanka soomalida itoobiya ayaa lixdii bilood ee uu jiray waxbadan ka qabtay dhinaca kor u qaadida iyo xoojinta adeegyada caafimaadka.
Isku dugaha guud ee mashruucan hoos u dhigida dhimashada hooyada iyo dhalaanka ee deegaanka soomalida itoobiya mudane Shaafici Daahir Muuse oo ah masuuliyiinta deegaanka somalida itoobiya ka qaybgalay shirkaasi oo aanu wax ka waydiinay qiimaynta ah ayaa sheegay in uu yahay mid lagu eegayey waxqabadka mashruuca intii uu jiray oo ah lixdii bilood ee ugu danbeeyay. Wuxuuna sheegay in ay deegaanadu ku soo bandhigayeen waxqabadka mashruucan, sidoo kalena ay garab socotay khibrad wadaaga ay is waydaarsanayeen deegaanadu kaasi oo gabagabadii laysla qaatay jihooyin lagu sii xoojinayo adeegyada uu bixiyo mashruucani isaga oo tilmaamay in qiimaynta xigta ee mashruucan lagu qabandoono deegaanka somalida itoobiya.